Ahoana no hihaona Filipina zazavavy an-tserasera. Yahoo Answers
Ny soso-kevitra voalaza etsy ambony dia lehibe. Tsy midika ho fanavakavahana saingy mino aho fa izany no teboka manan-danja mba hitondra ny. Eny, misy be dia be ny volamena-mpihaza avy any (tsy voatery scammers) fa mijery ny fiainana tsara kokoa. Ny ankamaroan’ny olona dia tsy voatery ho nanelingelina io. Ny sasany dia vao fikasana amin’ny fahazoana misy Filipina fa ho azy ireo, na inona na inona fikasana dia mety ho (eo amin’ny vehivavy ny ampahany). Ny vehivavy sasany fotsiny te-tany ny Caucasian, mangarahara sy tsotra. Tsy te-hihaona Filipiana iray izay mitady ny lehilahy noho ny antony samy hafa ireo. Aho Filipina ary indraindray aho dia tia ny olona Tandrefana ny Filipiana noho ny antony manokana. Tsy midika bash Filipiana, fa izaho mankafy sy mankasitraka ny toetra sasany dia nampitombo ny kolontsaina Tandrefana, toy ny fahaleovan-tena, dia mandroso ny toe-tsaina (open-tenanareo), ny sisa sy ny sisa. Ny tanjona dia, ianao te-hitsena ny vehivavy iray ao amin’ny le miaraka aminao, eo amin’ny lafiny ny fanabeazana, ny faharanitan-tsaina, mampiasa fitaovana arifomba ny (aho mampiasa izany voambolana manjavozavo). Izaho manokana mihevitra fa ny iray amin’ireo zavatra ratsy indrindra rehefa ny vady tsy afaka mametraka fanamby ho anareo. Ny olana amin’ny toerana ity dia ny kalitao ny vehivavy ianao hihaona any. Aho milaza anao, ary izaho mianiana izany, misy be dia be ny tokan-tena, fianarana, tsara tarehy, etc.
Fa resaka fotsiny ny mahita ny fomba ho anao ny hihaona olona toy izany. Satria azo antoka hoe helo dia tsy ho nandany ny androny tao amin’ny efitra amin’ny chat, raha fantatrao hoe inona no tiako ho lazaina.
Hitako ny sipa
Filipiana fo. Izany dia pirenena tianay eo Filipina ny ankizivavy mba hiresaka an-tserasera amin’ny ny vahiny sipa, ary izy ireo dia toy ny ampifamadiho an-tsoratra. Fony aho avy any, dia foana nanontany ahy raha toa ka efa misy namana lehilahy ao an-trano indray izay mitady ny mahafinaritra sipa. Aza miditra ao ny firaisana ara-nofo amin’ny chat mandra-hahafantatra azy ireo ny tena tsara, satria izy ireo dia mihevitra fa tsy ny anao. Ny zavatra iray dia tsy tiany indrindra anefa dia misy maneho ny ratsy ny toe-pihetseham-pontsika, na tsy fananam-paharetana. Tsy maintsy ho tsara rehetra ny fotoana. Izany dia tsara kokoa raha toa ka afaka mandamina ny dia lavitra avy any, ary nitsidika azy. Midika izany fa ianao dia mandray ny fifandraisana zava-dehibe ary dia hametraka anao tsara mialoha ny fifaninanana. Indrindra ho nanoratra ho maro ny olona indray, fa raha ny marina dia naka ny olana mba hitsena azy sy ny hihaona amin’ny fianakaviany izy, dia ho tia ny rano indray mitete ny hafa. Misy firy taona ny fady, na ny hazakazaka fady. Toy izany koa, tsy mieritreritra na inona na inona ny -zavatra ny olona handeha amin -javatra ny vehivavy. Ho vonona ny hitandrina ny mandroboka ao am-paosinao. Tsy mahazo be dia be, ary raha ny ankizivavy tsara dia tsy hanontany ianao noho ny vola, dia mitovy daholo, ny vola kely ka manome fahafinaretana be lavitra avy ny ohatry ny tena lany. Mividy entana ho azy finday dia tsy maintsy, satria midika izany izy dia afaka ny hifandray aminareo tsy manahy. Get amin’ny fiaramanidina. Manidina any Manila. Jereo any amin’ny trano fandraisam-bahiny, ary mandeha any amin’ny toeram-pivarotana lehibe. Pivarotana lehibe iray any Azia, Greenbelt toeram-Pivarotana lehibe na toeram-pivarotana lehibe. Izy mitady anao. Ny s kokoa noho ny hatramin’izay azonao atao te. Ny sasany dia mahalana ny firaisana ara-nofo ho an’ny voly. Maka fotsiny azy ireo ny sakafo hariva. Ny sasany dia mpivaro-tena, ary ianao dia mandoa vola ny momba ny dimampolo dolara Amerikana nandritra ny alina. Ny birao ankizivavy no mitady foana ny Caucasian bandy hanambady ary izy ireo dia aoka fantatrao fotsiny ny fomba izy ireo ny mijery anao. Fomba iray hafa dia tonga eto ny Phil, hiaraka Filipina Cupid, ary nanangana ny daty ho antoandro, ary ny iray ho an’ny sakafo hariva. Ianao dia manana ny tanana manontolo. Nah vady korontam-bato ny vahiny ny isan-taona any ho any hitsena ny vehivavy. Raha afaka manolotra na inona na inona ny toro-hevitra aza tsy mandainga. Ho marin-toetra kanefa tamin’izany andro izany tsy mitarika azy be loatra. Izy ireo dia mora latsaka ao amin’ny fitiavana anao, ary mety ho mahamenatra anareo mba manararaotra izay manao ny marina, raha nisafidy ny hanao izany. Fa izaho miarahaba anao amin’ny fisafidianana ny Filipina. Tsy ho diso fanantenana. Ny zazavavy rehetra tsy ho manenjika anao tsy ho toy ianao no mihevitra fa ianareo dia hahazo be dia be ny saina satria ny fotsy, te hino aho. Fa aza avela fa ny hahazo ny lohany. Ny fomba tsara indrindra mba hihaona ny ankizivavy dia amin’ny olona. Tonga eto, ary ho hitanao dia misy ihany koa ny maro tsara mamy ny ankizivavy mba hihaona izay tsy mandeha eo amin’ny andalana mba hanao izany. Ny vadiko dia manana namana iray izay mahatonga azy miaina eny ry zalahy mandefa ny mandany vola amin’ny cybercafé. Indraindray ny olona tonga hitsena azy n olona iray. Izy dia mandany ny alina iray amin’izy ireo ary avy eo dia mihetsiketsika eny. Maro ny ankizivavy on line fa marina ny teny, nefa tsy ho fantatrao mihitsy mandra-hahita ny tokantrano sy ny fianakaviana. hihaona zazavavy Filipiana amin’ny aterineto dia tena tsotra lehilahy ianao ihany no mila mijery ny zana-kevitra ary amin izany mandehana ary hihaona hatsaran-tarehy Filipina zazavavy Noho izany raha toa ianao mijaly noho ny fomba nervousness, mahita hoe sarotra loatra mba hanombohana ny fifanakalozan-dresaka, sy ny ady mba hahazoana ny vehivavy mba hiverina an-trano miaraka aminao, dia izao Ny Tao ny Badass dia ny antsipiriany fandaharam-potoana ho an’ny maka marina ny ankizivavy na aiza na aiza ianao hianatra inona marina ny ankizivavy dia voasariky noho izany dia afaka mamaritra ny tenanao amin’ny fahazoana ‘ny lehilahy ‘izay mahazo ny ankamaroan’ireo vehivavy. Ny Tao ny Badass koa hampianatra anao amin’ny fomba mba hahita ny tena teny, ary fantatrao na oviana na oviana ny vehivavy tia anao, ianao mianatra ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan’ny tsara sy ny ratsy vatana fiteny sy fomba mitovy tanteraka soa aman-tsara dia mampiasa ny zo fihetsika ny fomba fiasa. Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Mialoha ny Mpanjakavavy mandeha amin’ny alalan’ny»ny hanova ny fiainana», ahoana no azy isam-bolana»fananiham-bohitra ny tafika mena»afenina amin’ny vahoaka
← Ny lehilahy, handroso ho an'ny Filipiana nofy
Filipina: Aiza mba Hihaona Vehivavy tsara Tarehy - Philippines Tokana →